manan-tsaina lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
manolotra hilalao lalao an-tserasera tsaina, indrindra fa satria izy ireo nanolotra maimaim-poana. Dia ilaina ny fanatanjahan-tena isan'andro, dia afaka fotsiny tsindrio eo amin'ny lojika-tsaina, mianatra manisa ao an-tsainao, dia jereo ny zavatra madinika. Ny sekoly toy izany ihany koa ny nametraka asa, fa ny soso-kevitra dia mihoatra lavitra mahafinaritra amin'ny vodi. Miezaha hanimba ny rindrina ary manomboka ny hetsika ny hafa gorodona, mba hanafaka ny zavatra. Misintona ny tsara voaloboka, ka nampahatezitra ny mahasoa vokany. Tadiavo ny marina toerana misy ny fitaovam-piadiana sy hahazo ny artifact. Ivoahan'ny iray na roa.
Lalao Manan-tsaina tamin'ny Category:
Farany manan-tsaina lalao
Codeword an'i Arkadium
Lalao matematika amin'ny safidy maro
Trivia! Quiz Fianakaviana tsara indrindra
Piozila kofehy miloko
Lalao Arithmetika Elementary
Lalao Online Rehetra manan-tsaina lalao
amin'ny fotoana samihafa olombelona Entertainment invents mirindra ary amin'ny farany dia farany, nameno, ateraka indray, ary amin'izao fotoana izao Misarika ny sain'ny olona manan-tsaina lalao an-tserasera. Misy kilalao izay mbola nilalao razantsika, fa nisy ihany koa be dia be ny vaovao, indrindra fa ny fahatongavan'ny solosaina sy ny Internet.
Ny Lalao ara-tsaina isan-karazany
tontolo virtoaly feno soso-kevitra ny taratasy sy ny birao lalao, Puzzles, ary manolotra hevi-baovao tanteraka – vokatra ny teknolojia nomerika ankehitriny, ary koa ireo izay mivelatra ela be talohan'ny ny PC.
Ny lalao teny,
Dimy ambin'ny folo;
Ary eto no kilalao izay ankehitriny brainchild ny
Fantaro ny lalan-kivoahana, ary mitovy foto-kevitra.
Mind lalao an-tserasera matetika hifanindry amin'ny fahitalavitra, izay tsy maintsy maminavina ny teny na manome ny valiny marina ny fanontaniana avy amin'ny faritra ny siansa sy ny zavakanto. Ireo izay mahita sitrako manokana mizaha toetra ny herin'ny tsaina ny tenany, tsy malahelo fahafahana izany lalao toy izany koa. Ary ny hoe ny aterineto dia mifantoka amin'ny zava-misy dikan fahitalavitra fiarovana ny fitsipika tsy manam-paharoa, ihany no manampy fientanentanana ary raisina ho toy ny zava-tsarotra.
mba hampahery sy hameno ny fahalalana
ato amin'ity fizarana ity no niezaka hanome fahafaham-po ny filan-dratsiny ka noho izany nameno azy tamin'ny tolo-kevitra isan-karazany. Ankehitriny dia azo atao ny hampihatra ny fahalalana azony tany am-pianarana, sy ny zavatra niainany, mafy orina bazana mba hanenjika Puzzles.
fahalalana fizika sy simia,
Ny lojika ny fisainana,
Property valiny avy ny tena siansa.
mba hitarika ny zavatra eo amin'ny lalana marina, dia ilaina ny tafiditra ao:
Ny hery ny disadisa,
avy amin'ny Fanoherana,
ny taratasy mi-,
Misy fahasamihafana, izay ny hetsika izany. Raha toa ka handefasana zana-tsipìka amin'ny lasibatra, tsarovy fa ny Boom misy fiantraikany amin'ny rivotra, ny elanelana sy ny ny lanja. Fa raha miezaka ianao mba hilalao Bowling anaty rano, dia nampitombo ny vokatry ny tsy nampoizina. Avy amin'ny zavatra niainany, ianao mahalala sarotra dia Amin'ity tranga ity mba mialoha ny fitarihan 'ny zavatra. Izy no nanova ny Mazava ho azy fa nisafotofoto tanteraka. By tsaina kilalao ahitana be dia be ny onja. Ohatra, sodina fifandraisana na tariby – Izany fivoriana izany ihany koa ny fomba fisainany sy ny fandinihana. Lalao toy izany dia mety ho lasa mahaleo tena na asa Rehefa nandeha ny fotoana ny lalao hafa. Mameno fitondrany sy rano na mahay mampifandanja vato, fa tsy fialam-boly fotsiny, ary toy izany asa no matetika hita any am-pianarana boky na boky ho an'ny manam-pahaizana. Fa eo amin'ny ara-tsaina milalao lalao an-tserasera mahaliana kokoa noho ny mason-koditra ny famoriam-bola, manao kajy ao amin'ny kahie. Ao amin'ny fomba mifaly, dia mijery hafa tanteraka sy mahatonga anao te-haka ny fanamby ny amin'ny manaraka mahafinaritra.
indrindra fa tototry asa amin'ny fikatsahana lojika lalao. Dia manolotra zavatra rehetra::
Tadiavo ny zavatra eo amin'ny sary na ny foto-kevitra,
toerana nahita ny toerana,
Ny kajy ny matematika dikany,
mba hanangona ny Sary avy miodina faribolana, mihetsika ny kianja, miara-mitondra tapa-taratasy, sary na sarintany.
koa, dia matetika no nahita asa:
araka ny andalan-teny ny Misafotofoto,
mahita zavatra mitovy amin'izany,
hifindra ny andian-tsoratra manamarina ny andalan-teny,
Interaction teny hita.
Tamin'izany fotoana, toy ny zandriny indrindra Gamers nanosika mba ampidiro eto ny taratasy tsy hita ao amin'ny teny, hamaha ohatra mba hamantarana ny loko sy ny haben'ny zavatra, olon-dehibe mpilalao voaomana asa sarotra kokoa. Ankoatry ny lalao manerana izao rehetra izao, dia misy ireo izay mifantoka amin'ny ankizilahy sy ankizivavy, mba hahatonga azy ireo ho tena nahaliana fialam-boly.
amin'ny lalao video, samy mitady izay ilainy. Olona mila adrenaline sy ny fandatsahana ny herisetra an-virtoaly toerana. Olona iray izay tia tsy misy farany platformer-RPG ny jumps. Ny olona sasany dia tia simulators, izay rehetra nomena ny fahafahana hanorina ny tanànany na ny olombelona anjara. Ary ny sasany dia tsy afaka miaina tsy misy MMORPG, izay izao tontolo izao dia efa noforonina eo anatrehanao, ary ianao tsy tokony mba mifangaro ao izany, fa koa mba hahazoana fahombiazana, izay hita taratra eo amin'ny isan'ny ny sehatra. Ary misy ireo izay te-hilalao lalao an-tserasera an-tsaina. Izy ireo, mazava ho azy, toy ny rehetra ihany koa malaza Genres ny ambony, fa, na izany aza, ny mpankafy ihany koa ireo tsy hita. &Nbsp;